ထိပ်ဆုံး 11 ကိုယ်ထူကိုယ်ထနှင့် Self- တိုးတက်မှုစာအုပ်များ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
TOP 11 အရောင်းရဆုံး Self- အကူအညီနှင့် Self- တိုးတက်မှုစာအုပ်များ
သူတို့ဘာတွေလဲဆိုတာသိချင်လား အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးအကြံပြုခဲ့သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီစာအုပ်တွေ y ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်မှု? ဤတွင်ငါသည်သင်တို့ကိုဤ TOP 11 နှင့်အတူထားခဲ့ပါ။
ဒါပေမဲ့ဒီစာရင်းကိုမကြည့်ခင်သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာအုပ်များအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုများကိုချီးကျူးစေသောဤအလွန်ကောင်းသောဗီဒီယို။ အကယ်၍ သင်သည်စာအုပ်ကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပါကသင့်အားစိတ်လှုပ်ရှားစေမည့်ဗီဒီယိုတို။
ဤဗီဒီယိုသည်စကားလုံးများဖြင့်ကောင်းမွန်သောအမြင်ကစားခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဖတ်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုပြောပြသည်။ အကြိုက်ဆုံးများသို့သိမ်းရန်ဗွီဒီယိုတစ်ခု -
သင်ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုသည့်စာအုပ် ၆၈ ချက်တွင်သင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်
1 ၁) Tony Robbins မှ "Unlimited Power"
2 ၂) Daniel Goleman မှ "စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေး" ။
3 (၃) Wayne Dyer မှ "သင်၏မှားယွင်းသောဇုန်များ" ။
4 ၄) Rlex Rovira မှ "ကံကောင်းပါစေ" ။
5 ၅။ Robert Kiyosaky မှ "Rich Dad, Poor Dad"
6 ၆) Rlex Rovira မှ«အတွင်းပိုင်းသံလိုက်အိမ်မြှောင်»။
7 ၇။ Jorge Bucay မှ«စဉ်းစားရန်ပုံပြင်များ»။
8 ၈။ Dr. Emilio Garrido-Landívarမှ“ ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားရရန်နည်းလမ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ” ။
9 ၉။ ဗစ်တာဖရန့်ခ်ကလူ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေခြင်း။
10 ၁၀။ အန်တိုနီရော်ဘင်မှ "အတွင်းပိုင်းnerရာကိုနှိုးခြင်း" ။
11 Napoleon Hill မှ 11) "စဉ်းစားခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝခြင်း" ။
11.1 ယနေ့ Self-Help ဗီဒီယိုရင်းမြစ်များ -
၁) Tony Robbins မှ "Unlimited Power"
ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုမင်းအိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးမယ်ဆိုရင် ပါဝါကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းသည်သင်လိုချင်သောနှင့်ထိုက်တန်သည့်ထူးကဲသောဘ ၀ အရည်အသွေးကိုမည်သို့ရရှိမည်ကိုပြလိမ့်မည်။ အန်သိုနီ Robbins လူသန်းပေါင်းများစွာကိုသူ၏စာအုပ်များ၊ တိပ်ခွေများနှင့်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများမှတဆင့်သင်လုပ်နိုင်သော၊ ရရှိနိုင်၊ အောင်မြင်မှုနှင့်ဖန်တီးနိုင်သည့်သင်၏စိတ်စွမ်းအားကိုအသုံးချခြင်းဖြင့်သင်၏ဘဝအတွက်သင်လိုချင်သမျှကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။
ပါဝါကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းသည်စိတ်အတွက်တော်လှန်ရေးသမားစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်နှင့်အတူ အုပ်ရေ ၁ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဘဏ္financialာရေးလွတ်လပ်မှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုတစ်ဆင့်ချင်းသင်ပြမည်။ Amazon မှာဝယ်ပါ
၂) Daniel Goleman မှ "စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေး" ။
ဒံယလေက Goleman အဆိုပါတွေ့ရမယ် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေး အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအချက်အဖြစ် ၎င်းသည်သမားရိုးကျထောက်လှမ်းရေးနှင့်အိုင်ကျူစမ်းသပ်မှုများမှရရှိသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုသဘောတရားများကိုငြင်းပယ်သည်။ အဆိုပါစာအုပ်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌စာအုပ်ပေါင်း ၅၀၀၀,၀၀၀ ခန့်ရောင်းချခဲ့ပြီးဘာသာစကားပေါင်း ၄၀ သို့ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်။ Amazon မှာဝယ်ပါ
(၃) Wayne Dyer မှ "သင်၏မှားယွင်းသောဇုန်များ" ။
ဤစာအုပ်သည်မကောင်းသောအတွေးများမှမည်သို့လွတ်မြောက်ပြီးသင်၏ဘ ၀ ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပုံကိုပြောပြသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အပြစ်ရှိတယ်ကဲ့သို့စိတ်ခံစားမှုကို disableing တစ်စီးရီးရှိသည်။ သင့်ကိုမတိုးတက်စေသည့်သင်၏အတွေးကဘာလဲ။ ဝိန်းဒိုင်ယာကသင့်အားသူတို့ကိုခွဲခြားသိမြင်စေပြီးသင့်အားစိတ်ဓာတ်ကျစေသည့်အကြောင်းရင်းများစွာကိုပြောပြသည်။ ဤစာအုပ်သည်ကမ္ဘာအနှံ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ၃၅ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့စံချိန်အားလုံးကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့သည်။ Amazon မှာဝယ်ပါ
၄) Rlex Rovira မှ "ကံကောင်းပါစေ" ။
Rlex Rovira သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူသည်စာအုပ်များသို့လွှဲပြောင်းပေးသောထူးကဲသော oratia ရှိသည်။ ဤစာအုပ်သည်မှော်အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ အားထုတ်မှု၊ ဇွဲရှိခြင်းနှင့်ဘယ်တော့မျှအရှုံးမပေးနိုင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပစာစကား။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့သေချာပါတယ် Amazon မှာဝယ်ပါ
၅။ Robert Kiyosaky မှ "Rich Dad, Poor Dad"
ဒါကနောက်စာအုပ်တစ်ခုပါ။ သင်ပြီးသွားတဲ့အခါမင်းရဲ့ဘဝကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်ငွေရေးကြေးရေးလွတ်လပ်မှုကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းပြများစွာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်၏ငွေအပေါ်သင်၏ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ Amazon မှာဝယ်ပါ
၆) Rlex Rovira မှ«အတွင်းပိုင်းသံလိုက်အိမ်မြှောင်»။
နံပါတ် ၆ မှာငါတို့ထပ်ရှိနေပြီ အဲလက်စ် Rovira. "အတွင်းစိတ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်" ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်သူဌေးထံစာရေးသည့်စာတွင်ပါ ၀ င်သည့်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဘဝတွင်အရေးကြီးသောအရာများကိုသင့်အားရောင်ပြန်ဟပ်စေမည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ Amazon မှာဝယ်ပါ
၇။ Jorge Bucay မှ«စဉ်းစားရန်ပုံပြင်များ»။
လူ့အပြုအမူကိုထင်ဟပ်စေသောနေ့စဉ်ဘ ၀ အခြေအနေများအတွက်ဥပစာတစ်ခုဖြစ်သည့်ပုံပြင်များ။
၈။ Dr. Emilio Garrido-Landívarမှ“ ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားရရန်နည်းလမ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ” ။
Dr. Emilio Garrido-Landívarသည်ငါနေထိုင်သော Pamplona ရှိကျော်ကြားသောစိတ်ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူ၌အလွန်တိုက်ရိုက်ပုံစံရှိပြီးအလွန်ကူးစက်တတ်သောစွမ်းအားကိုထုတ်လွှင့်သည်။ ဤစာအုပ်တွင်သူသည်စာရင်းပုံစံပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်အပန်းဖြေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအရည်အသွေးကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်၊ များစွာနားလည်ရန်နှင့်ပြproblemsနာများအတွက်လိုအပ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုလမ်းညွှန်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောအလုပ်ကိုပေးသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျောင်းများနှင့်အင်စတီကျူးရှင်းများတွင်မဖြစ်မနေဖတ်ရမည့်ခိုင်လုံသောသက်သေခံချက်ပါသောစာအုပ်တစ်အုပ်။ Amazon မှာဝယ်ပါ
၁၀။ အန်တိုနီရော်ဘင်မှ "အတွင်းပိုင်းnerရာကိုနှိုးခြင်း" ။
အန်တိုနီရော်ဘင်ကိုပြန်လုပ်ပါ။ ဤစာရင်းတွင်ပါရှိသည့်ပထမနှင့်လိုက်ဖက်သောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ သင်၏စိတ်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးအရာများကိုရရှိရန်သင်ကသင်ကြားပေးသည်။ အကယ်၍ သင်စိတ်ထဲထားရှိလျှင်အရာရာတိုင်းကိုအောင်မြင်နိုင်မည်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်နိုင်အောင်သင်ပေးသည်။ Amazon မှာဝယ်ပါ
Napoleon Hill မှ 11) "စဉ်းစားခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝခြင်း" ။
ငါဒီစာအုပ်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ထားခဲ့ချင်တယ်၊ ဒီတိုးတက်မှုအားလုံးရဲ့မူလအစပဲ။ နပိုလီယံဟေးလ်သည်အောင်မြင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်နောက်ကွယ်ရှိမူ ၁၃ ခုကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤစာအုပ်ကသင့်အတွေးများကို ကျေးဇူးတင်၍ သင်ဘယ်သောအခါမျှစိတ်ကူး။ မရနိုင်သောအောင်မြင်မှုအဆင့်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်ဟုစိတ်ကူးပေးသည်။
"စဉ်းစားပြီးချမ်းသာလာအောင်လုပ်ပါ" ၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစာပေ၏ဤအမျိုးအစားတစ်ခုလုံး၏လက်ရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုစုပ်ယူပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌သန်းပေါင်း ၃၀ ကျော်ရောင်းချခဲ့သည့်စာအုပ်ဖြစ်သည်။
သင်ဤအကြောင်းအရာကိုနှစ်သက်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကိုစာရင်းသွင်းပါ ဒီမှာ
ယနေ့ Self-Help ဗီဒီယိုရင်းမြစ်များ -
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာအုပ်များ » TOP 11 အရောင်းရဆုံး Self- အကူအညီနှင့် Self- တိုးတက်မှုစာအုပ်များ
ငါ R. Steven Covey ရဲ့ "ထိရောက်သောလူ၏အလေ့အထ ၇ ခု" ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မယ်ဆိုပေမယ့်ဒါဟာရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်
Alejandra Morales placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်။ မင်းရဲ့သား Sean Covey ရဲ့စာအုပ်ကိုငါဖတ်ပြီးပြီ။ ဒါကဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်အထူးဖြစ်ပေမဲ့လည်းငါအရမ်းထောက်ခံတယ်။
Alejandra Morales အားပြန်ပြောပါ
Weeryytthaa Vaazqueez ဟုသူကပြောသည်
Weeryytthaa Vaazqueez သို့ပြန်သွားပါ
Aly corralejo ဟုသူကပြောသည်
ငါကြွယ်ဝသောဖခင်ဆင်းရဲသောဖခင်နှင့် ပို၍ ကြိုက်နှစ်သက်သည်ကိုကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေကြောင်းသိသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ robert kiyosaki
Aly Corralejo အားပြန်ပြောပါ
Rodrigo Poma Sanga ဟုသူကပြောသည်
Rodrigo Poma Sanga သို့ပြန်သွားပါ
အလွန်ကောင်းသောစာအုပ်များ။ ကျွန်တော် Reddit အသုံးပြုသူတစ်ယောက်နှင့် Zig Ziglar နှင့် Paul J Meyer တို့၏ဘာသာပြန်ထားသောဘာသာပြန်ထားသော awiobooks တွင်တစ်ချိန်ကဖတ်ဖူးသကဲ့သို့၊ အရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်မက်များအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ သို့မဟုတ်တူညီသောအရာ, ငါတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုရက်စွဲတစ်ခုချပြီးဖြစ်ကြောင်း။ စတိဗ်ချန်းဒယ်၏သူများသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ မည်သူမဆိုသူမရှာလျှင်ဝယ်သူမည်သူမဆိုရှာတွေ့လိမ့်မည်။
ကောင်းပါပြီ။ စာမျက်နှာအားလုံးကိုဖတ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအလွန်စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်စေသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရန်ဖြစ်သော်လည်းယခုလက်ရှိစီးပွားရေးသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏နည်းလမ်းကိုနောင်တွင်ဆက်လက်ဝယ်ယူနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
Flor Uribe အားပြန်ကြားပါ
Olga Perez Ramirez ဟုသူကပြောသည်
Olga Perez Ramirez အားပြန်ပြောပါ
Angela Huerto Figueredo ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
စူပါ !! ငါချစ်တယ်
Angela Huerto Figueredo အားပြန်ပြောပါ
Yiemy gom ဟုသူကပြောသည်
Yiemy Gom သို့ပြန်သွားပါ
လူးကပ်စ Nahuel Dierickx ဟုသူကပြောသည်
လူအနည်းငယ် (ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စီမံခန့်ခွဲသူကထုတ်ဝေသည်။ ) သင်မှအကူအညီရထိုက်သည်။ သင်စာအုပ်များကိုသင်ပြုစုပေးခဲ့ခြင်း၊ သင်သူတို့ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်သင့်ကိုသူတို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခဲ့ခြင်း မှလွဲ၍ သင်အတွက်ကျေးဇူးတင်စရာဘာမှမရှိပါ။ စာရေးသူမှသင်နားမလည်သောအရာများကိုသင်သိပြီးနားလည်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ကိုထည့်သွင်းလိုပါကကျွန်ုပ်သည်သင့်အားနောက်ထပ်အကြောင်းအရာများကိုပေးမည်။
လူးကပ်စ Nahuel Dierickx ကိုပြန်ပြောပါ
Noemi gomez corrales ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ SMILE AND BE HAPPY ၏ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရန်၊ မိသားစုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိုင်းပြည်အတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။
Noemi Gomez Corrales အားပြန်ပြောပါ
Nelly Principe Valverde ဟုသူကပြောသည်
Nelly Principe Valverde သို့ပြန်ပြောပါ
Miguel angtel ဟုသူကပြောသည်
miguel angtel အားပြန်ပြောပါ
Miguel aquino ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေ၊ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်ချက်တစ်ခုထပ်ထည့်သည်။ “ တစ်ခုကတစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သွားသည်” ဤစာဖတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘဝတွင်မှန်ကန်သောအရာများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
miguel aquino သို့ပြန်သွားပါ
ပက်ထရီရှာ Grijalva Berrocal ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လိုအားလုံးစာမကျြနှာကိုသာဖတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားအလွန်စိတ်ဝင်စားမှုရှိစေပါကကျွန်ုပ်ဖတ်ပါ။ ယခုပင်စီးပွားရေးသည်အလွန်ကောင်းပါသည်ကျွန်ုပ်နောက်မှကျွန်ုပ်သည်သင်၏နည်းလမ်းကို ၀ ယ်ယူနိုင်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝတွင် ဆက်လက်၍ အောင်မြင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
Patricia Grijalva Berrocal အားပြန်ပြောပါ
မာရီယာ Isabel Zuñiga Jimenez ဟုသူကပြောသည်
Maria Isabel Zuñiga Jimenez အားပြန်ကြားပါ
Carla zalazar ဟုသူကပြောသည်
မာရီယာ Isabel Zuñiga Jimenez .. ငါစာအုပ်များကိုအခမဲ့ download လုပ်နိုင်သောမည်သည့်စာမျက်နှာကိုမဆိုသိပါသလား။
Carla Zalazar သို့ပြန်သွားပါ
Alma Delia ကက်စထရို ဟုသူကပြောသည်
Alma Delia Castro အားပြန်ပြောပါ
Danny Gabriel Muñoz Ugalde ဟုသူကပြောသည်
Danny Gabriel Muñoz Ugalde ကိုပြန်သွားပါ
Angeles စတူဒီယို ဟုသူကပြောသည်
Angeles Estudios သို့ပြန်သွားပါ
Francisco ကဟာနန်ဒက်ဇ် Olarte ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးအရမ်းကောင်းတယ် .... သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုကောင်းကောင်းအကြံပေးလိုသည်မှာသေချာသည်။
Francisco Hernandez Olarte အားပြန်ပြောပါ
အော်စကာ Mesa Robles ဟုသူကပြောသည်
အော်စကာ Mesa Robles အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
Adrin ဟာနန်ဒက်ဇ် Del အိန်ဂျယ် Del အိန်ဂျယ် ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ဟာစာအုပ်၏ဘဏ္theာကိုမသိကြဘူး ... Kmo ဤမျှလောက်များစွာသော ,,, ငါ "ကျွန်" "သံချေးသံချပ်ကာ၏ Knight ၏တ ဦး တည်း" ငါ၏ဘုရားသခငျသညျငါ၏ဒိန်ခဲ left "ဟုအဆိုပါစုစုပေါင်းပယ်ရှား" ... သူတို့ကကောင်းသော heeee များမှာ ... သူတို့ကနောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ...
Adrin Hernandez Del Angel Del Angel သို့ပြန်သွားပါ
Eddyn Diaz ဟုသူကပြောသည်
'Eddyn Diaz သို့ပြန်သွားရန်
စန်ဒရာရန် Oviedo ဟုသူကပြောသည်
Ismael အချိန်ကာလငါကြိုက်တယ်, ဆက်ဖတ်ခဲ့တယ်
Sandra Yanet Oviedo အားစာပြန်ပါ
Santiago Cástañeda Arango သည်မည်သည့်တိုးတက်မှုစာအုပ်ကိုဖတ်ခဲ့ပါသနည်း
Marvin သီချင်းဆိုသည် ဟုသူကပြောသည်
စာရေးသူ Camilo Cruz ရဲ့ La Vaca ... ထိုစာအုပ်သည်ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Marvin Sance အားပြန်ပြောပါ
Mark Gallardo ဟုသူကပြောသည်
အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေတဲ့သူကငါဒီစာရင်းထဲမှာပါတာကိုအများဆုံးကြိုက်တယ်။ ကျနော့်အမြင်မှာသူကမင်းရဲ့မှားယွင်းတဲ့ဇုန်တွေဖြစ်ဖို့မထိုက်တန်ဘူး။ ငါမကြာသေးမီကဖတ်ခဲ့ပြီးသော်၎င်းသည်စာအုပ်ကောင်းမဟုတ်ပါ။
လျှို့ဝှက်ချက် ၁၀ ခုကဘယ်သူ့ကိုမှအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ NC Kurt - Ediciones B
Leticia Miralrio ဟုသူကပြောသည်
ငါစာအုပ်တော်တော်များများဖတ်ပြီးခဲ့ပေမဲ့ငါအနှစ်သက်ဆုံးကတော့ရွှံ့နွံတွေတစ်နှစ်နဲ့နှစ်တစ်ရာထီးတည်းနေတဲ့အချိန်မှာပျံနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါထပ်လေ့လာချင်တယ် ...
Leticia Miralrio အားပြန်ပြောပါ
ပါပလော Acosta ဟုသူကပြောသည်
Juan Francisco Gallo ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ ရင့်ကျက်သောအပြုအမူနှင့်လူ့ဆက်ဆံရေးကောင်းသောစာအုပ်ကိုဖတ်ပါ
Pablo Acosta အားစာပြန်ပါ
ဗစ်တိုးရီးယား Capri ဟုသူကပြောသည်
Rich Dad Poor Dad အကြောင်းရေးခဲ့တာအမှန်ပါပဲ၊ The Flow Quadrant ကိုစာရေးသူတစ်ယောက်တည်းကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်းကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။
Victoria Capri အားပြန်ပြောပါ
ငါဆိုင်းငံ့ထား "ငွေစီးဆင်းမှု၏ quadrant" ငါ့ကိုသတိပေးများအတွက်ဗစ်တိုးရီးယားကျေးဇူးတင်ပါသည် ...
MIGUEL ANGEL LAZARO ဟုသူကပြောသည်
MIGUEL ANGEL LAZARO သို့စာပြန်ပါ
Melina gonzalez ဟုသူကပြောသည်
Melina Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
Sabhy godinez ဟုသူကပြောသည်
Sabhy Godinez အားပြန်ပြောပါ
Rita Susana Velosa ဟုသူကပြောသည်
Rita Susana Velosa အားစာပြန်ပါ
Renatta Rozzy Novoa Goyes ဟုသူကပြောသည်
Renatta Rozzy Novoa Goyes အားတုံ့ပြန်ပါ
ခရစ် Ortiz ဟုသူကပြောသည်
ဤတွင်ငါသည်လည်းကြီးစွာသော, နှုတ်ခွန်းဆက်၏အခြားအဲလက်စ် Dey ၏ပစ္စည်း add လိမ့်မယ်!
Chris Ortiz ကိုပြန်သွားပါ
Chris Ortiz နှင့်ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ Alex Dey သည်လက်တင်အမေရိကတွင်အကောင်းဆုံးလှုံ့ဆော်သူဖြစ်ပြီးသူလည်းပါဝင်သင့်သည်၊ ကျနော့်အမြင်တွင်၊ အပိုင်းအစများစွာကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးသော်လည်း၊ အခြားသူများနှင့်တန်းတူအရေးပါသောအခြားသူများကိုဖတ်ပြီးသော်လည်းဥပမာအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုအောင်မြင်ရန်အလွန်အရေးကြီးပုံရသည့်စာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်ထားခဲ့သော်လည်း၊ အပိုင်းအစများစွာကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့ပြီးပါပြီ။ သို့သော်၎င်းကိုဖော်ပြရန်သူများကိုဂျူဗန်ဆာဗေးဒေါဂါဗာဟုခေါ်သည် , မြတ်သောစာအုပ်
အမှန်တရားမှာကြွယ်ဝသောဖခင်ဆင်းရဲသောဖခင်သည်အလွန်ညံ့ဖျင်းသောစာဖြင့်ရေးသားထားသောစာအုပ်ဖြစ်သည်၊ ထိုအယူအဆသည်အလွန်အခြေခံကျပြီးစာအုပ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြထားသည်၊ ဥပမာများပေးပြီးကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများကိုပြောပြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ငွေနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏စိတ်ပြောင်းရန်ကြိုးစားနေပါက T. Harv Eker ရေးသားသော "Millionaire Mind" စာအုပ်ကိုဖတ်ပါ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုကောင်းတယ်၊ youtube မှာဆွေးနွေးပွဲတွေတောင်ရှိတယ်။
ငါစာရင်းထဲထည့်ချင်ပါတယ်လည်း Louise Hay ကမင်းရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုကုစားနိုင်မလဲဆိုတာငါဖတ်ပြီးကတည်းကငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်။ အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်တယ်
Cecilia Gonzalez တောရက်စ်နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
Cecilia Gonzalez Torres အားပြန်ပြောပါ
Blonde jaen ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါ။ လူသားများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်ကြွယ်ဝသောပစ္စည်းများကိုပေးပါ။ ကောင်းသောအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။
Rubia jaen သို့ပြန်သွားပါ
ssany လား ဟုသူကပြောသည်
Mariela Salazar ဟုသူကပြောသည်
ထောက်ခံချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါမားကို့စဂယ်လာဒိုနဲ့သဘောတူတယ်၊ မင်းရဲ့မှားယွင်းတဲ့ဇုန်တွေကိုကောင်းကောင်းမတွေ့ဘူး။ အများကြီးပိုကောင်းတဲ့စာပေအကျင့်ကိုကျင့်ရှိပါတယ်။ ငါ Jorge Bucay ၏လမ်းပြမြေပုံ၊ Og Mandino ၏အောင်မြင်မှုတက္ကသိုလ်၊ La Culpa es de la Vaca စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Mariela Salazar သို့ပြန်သွားပါ
PERSONAL SUPERIORATION မှထုတ်ဝေသောအလွန်ကောင်းသောနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးများ။
ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်အချို့ကိုဖတ်ပြီးကြိုက်ခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာများသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးအထူးအကြံပြုလိုသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နှစ်အရွယ်ကြင်ဖော်မဲ့မိခင်တစ်ယောက်ပါ
ဟယ်လိုစတား။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာရှာဖွေခဲ့ပြီးပြီ။ အလွန်ကောင်းမွန်လှတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုငါတွေ့ပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာတစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးတွေရဲ့အမှန်တကယ်သက်သေခံချက်အပေါ်အခြေခံပြီး၊ သူတို့အခြေအနေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြောပြပြီးသင့်အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်။ Consuelo Mar-Justiniano မှ“ Single with Commitment” ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ သင်ဒီမှာဝယ်နိုင်သည် Amazon တွင်စာအုပ်ဝယ်ပါ
ဟံသာဝတီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါကတော့အဲဒါကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးစာအုပ်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်။ ဒါကိုဂုဏ်ယူစရာမဖြစ်ဖို့အတွက်သင်အကြံပေးတဲ့နောက်ထပ်စာအုပ်တစ်အုပ်။
ငါ့အာရုံကိုဖမ်းမိသောစာအုပ်ရှိပါသည်။ ငါမဖတ်ရသော်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံရသည်။ ၎င်းမှာ "နှိမ့်ချခြင်းနှင့် ဦး ဆောင်ခြင်း" အကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းကိုသင်မြင်။ ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ
ငါက Doc Cesar Lozano ပါဝင်စေချင်တယ်၊ သူ့ဟောပြောချက်တွေကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်
သူငယ်ချင်းများကိုမည်သို့အနိုင်ယူနိုင်မည်နည်း။ Dale Carnegie
ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ရေသမား၊ ကလေးမရှိဘဲ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်မိသားစုမရှိဘဲကျွန်ုပ်နေထိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၅ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်နှင့်ဆရာတစ် ဦး အနေဖြင့်လေ့လာရန်နှင့်မွေးရပ်မြေတွင်အိမ်တစ်လုံးဆောက်လုပ်ရန်ငွေစုဆောင်းရန်နှင့်ဤစာအုပ်များကိုရှာရန်ကြိုးစားနေသည် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ... ဒီစာအုပ်ထဲကဘယ်ဟာကိုအကြံပေးမလဲ။ ငါယူအက်စ်အေသို့ရောက်ကတည်းကငါ၏အကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပေါငျးတို့သငြင်းဆန်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ် ????
မင်္ဂလာပါပါရာရာ၊ ကျွန်တော်ဒီစာရင်းထဲကအချို့ကိုဖတ်ပြီးပြီ။ စဉ်းစားပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာလာတာဖတ်တယ်။ အဲဒါကစာအုပ်ကောင်းတစ်ခုပါ။
အားလုံးအခြားမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများအားစာဖတ်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားရန်ကူညီပေးသည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောမှတ်ချက်များနှင့်အလွန်ကောင်းသည်ကိုတွေ့မြင်ပါသည်။ သို့သော်ဤစာအုပ်များကကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်၊ အင်တာနက်မှစာအုပ်များကူးယူရန်သို့မဟုတ်သင် pc မှသင်ဖတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းသင်ကြားပေးသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြင်အာရုံချို့ယွင်း။ သွားပါကဒုတိယအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်၏တိုးတက်မှုသတင်းများကိုသင်ကြားပေးသည်။
မူလစာအုပ်များကို ၀ ယ်ကြပါစို့။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကူညီသင့်သလောက်ရိုးသားပါကစာအုပ်ရောင်းချခြင်းမှအသက်ရှင်လျက်နေထိုင်သူများကိုကူညီပေးပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင်မင်း OG MANDINO ရဲ့ UNIVERSITY OF SUCCESS စာရင်းကိုမင်းရဲ့စာရင်းထဲထည့်ချင်တယ်။
ဉာဏ်ပညာကိုစိတ်ထက်သန်စွာထားခြင်းသည်ရည်မှန်းချက်များ၏အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့် Rhonda Byrne ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဦး စွာအကြံပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တွင်သင်၏အမှားအယွင်းများရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်ဖတ်။ မရပါ၊
ငါကြိုက်တယ် တိုးတက်မှု၏စာအုပ်များအထူးသဖြင့် antoni de Mello